उच्च रक्तचाप भएकाले खानै नहुने खानेकुराहरु र उच्च रक्तचापका कारण, यस्ता छन् - ज्ञानविज्ञान
उच्च रक्तचापका कारण, यस्ता छन्
मानिसको मोटोपनले पनि उच्च रक्तचापको सम्भावनालाई बढाउँछ । मोटो मानिसको शरिरमा रहने बोसोको मात्राले शरिरका धमनीलाई कसिलो बनाउँछ जसले गर्दा शरिरमा रगतको प्रवाह आफ्नै गतिले हुन पाउँदैन र यसले रक्तचापको सम्भावना निम्त्याउँछ ।
नुनको बढी प्रयोग:
शरिरमा आवश्यक पर्ने नुनको मात्रा भन्दा बढी नुन प्रयोग गर्नाले पनि उच्च रक्तचापको सम्भावनालाई बढाउँछ । नुनमा रहेको सोडियमले रक्तचापलाई बढाउन मद्दत गर्छ । सकेसम्म ठिक्क मात्रामा नुनको प्रयोग गर्नु स्वास्थ्यका लागी फाइदा जनक हुन्छ ।
बढी रक्सी पिउने मानिसलाई पनि रक्तचापले चाडै थला पार्न सक्छ ।
उच्च रक्तचाप बढाउने अर्को कारण हो तनाव । जति धेरै तनाव त्यतिनै उच्च रक्तचापको समस्या हुने गर्छ ।
मानिसको उमेरसँगै रक्तचापको सम्भावना पनि बढ्दै जान्छ । जब मानिस बृद्ध अवस्थामा पुग्छ उच्च रक्तचापको जोखीम झन् बढ्न जान्छ । बृद्ध अवस्थामा पुगेका मानिसको धमनीहरूको कडा हुँदै जाँदा उच्च रक्तचापको मात्रालाई बढाउने गर्छ ।
मानिसको वंशाणुगत गुणले कारण पनि उच्च रक्तचापको सम्भावना रहन्छ । परिवारमा पहिले देखी नै कोही उच्च रक्तचापको रोगी छ भने नयाँ पुस्तामा पनि सर्ने सम्भावना उत्तिकै हुन्छ ।
पुरूषलाई बढी उच्च रक्तचापको खतरा हुन्छ ।
# उच्च रक्तचाप नियन्त्रण गर्ने ८ उपाय
उच्च रक्तचाप मानसिक तनावग्रस्त आधुनिक जीवनशैलीको परिणाम हो । अति व्यस्त जीवन, उच्च आकांक्षा, असन्तोष, अत्यधिक कार्यबोझ आदिले रक्तचाप बढाउन मद्दत पुर्याउछ । आजको युगमा काम नगर्ने, उच्च आकांक्षा नराख्ने व्यक्ति विकासको गतिमा पछाडि पर्छ । अगाडि बढ्ने होडबाजीले रक्तचाप पनि माथि पु¥याउँछ ।
यसको मतलब रक्तचाप नियन्त्रण गर्न विकासको गीतमा रोक लगाएर जोगी नै बनेर हिँड्नु पर्छ भन्न खोजेको अवश्य होइन । तर रक्तचाप बढ्ने रोग लागेका व्यक्तिले यस प्रकारको व्यस्त जीवनशैलीमा परिवर्तन ल्याउन सके रक्तचाप नियन्त्रण गर्न सजिलो पर्छ ।
निश्चित दिनचर्या अनुसार काम गर्ने, बढी कार्यबोझ नलिने, विवादास्पद काममा हात नहाल्ने, अफिसको काम घरमा कहिल्यै पनि नल्याउने, महत्वाकांक्षी नबन्ने, काममा फलको आशा बढी नगर्ने, असफलतालाई सजिलैसँग स्वीकारी हतोत्साहित नहुने, छुट्टीको दिनमा मिटिङ्ग तथा अफिसका काम छाडेर श्रीमती÷श्रीमान् वा बालबच्चालाई पनि समय दिने, उनीहरुसँग छुट्टीको समयमा घुम्न जाने, प्रत्येक वर्ष १ पल्ट २–३ हप्ताको छुट्टी मिलाई विश्राम र मनोरञ्जन गर्ने बानी बसाल्ने गर्नुपर्छ । यस प्रकार जीवनशैलीमा परिवर्तन ल्याउन आफूले प्रयास गरे असम्भव छैन ।
उच्च रक्तचाप र नुनको प्रत्यक्ष सम्बन्ध छ । रक्तचाप घटाउन खाद्य पदार्थमा नुनको मात्रामा कटौती गर्नु अत्यावश्यक छ । उच्च रक्तचाप नियन्त्रण गर्न दैनिक ३ देखि ५ ग्रामभन्दा बढी नुनको उपभोग गर्नु हुँदैन ।
खाना पकाउँदा अत्यन्त कम मात्रामा नुन राख्ने, खाना खाँदा अतिरिक्त नुन उपभोग नगर्ने, बट्टा भित्रका नुन बढी हुने खाद्य पदार्थ नखाने, बोतलमा राखेको अचार र पापड नखाने, नुनिलो बदाम, आलु चिप्स, नम्किन विस्कुट नखाने, चिज, बटर जस्ता नुन बढी हुने बस्तु नखाने, स्वादका लागि नुनको सट्टा कागती, मरिच, तोरीको पिना आदि प्रयोग गर्ने गर्नुपर्छ ।
मन र मस्तिष्कलाई शान्त पार्न सके उच्च रक्तचाप पनि शान्त भएर जान्छ । योग अभ्यासको माध्यमबाट मन र मस्तिष्कलाई शान्त पार्न सकिन्छ । तन्त्रयोग यस्तो उपाय हो जसबाट मन र मस्तिष्कलाई विश्राम प्राप्ती हुन्छ र उच्च रक्तचाप तथा अन्य हृदयका रोग समाधान हुने आशा गरिन्छ ।
स्वास्थ्य भनेकै शरीर र मस्तिष्क बीचको शान्तिपूर्ण सह–अस्तित्व हो । उच्च रक्तचापले यस्तो शान्तिपूर्ण सह–अस्तित्वलाई खलबल पार्छ । यो खलबलीलाई ठिक पार्ने तन्त्रयोगका चार खुट्किलामध्ये प्रथम खुट्किलो हथयोग हो भने अन्तिम अर्थात् चौथो खुट्किलो राजयोग हो । ध्यानको एक माध्यम हो राजयोग ।
राजयोग उच्च रक्तचाप घटाउने अत्यन्त प्रभावकारी उपाय हो । यस प्रकार तन्त्रयोगले हथयोग र राजरोग जस्ता वैज्ञानिक उपायद्वारा शरीर र मस्तिष्कलाई शान्त बनाइ उच्च रक्तचाप तथा मुटुका अन्य रोगको उपचारमा सहयोग पु¥याउँछ । यसले मुटुको रक्षाका लागि दुवै प्रतिकारात्मक र उपचारात्मक महत्व राखदछ ।
व्यायामले रक्तचाप घटाउन मद्दत पुर्‍याउँछ । हिँड्ने, विस्तारै कुद्ने, पौडी खेल्ने, साइकल चलाउने जस्ता व्यायामले रक्तचाप नियन्त्रणमा सकारात्मक भूमिका खेल्छन् । यस्ता व्यायाम नियमित गर्ने बानी बसाल्नु पर्छ ।
सबैभन्दा सजिलो र प्रभावशाली व्यायाम नियमित रुपमा दैनिक १ घण्टा कम्तिमा ४ किमी प्रति घण्टाको दरले हिँड्नु हो । हिँड्दा शरीरलाई बढी सकस पर्नु चाहिँ हुँदैन । छाती दुख्ने वा दम फुल्ने अवस्थासम्म पुग्ने गरी व्यायाम गर्नु हुँदैन । विस्तारै शुरु गरेर पछि तिव्रता बढाउँदै जानुपर्छ ।
उच्च रक्तचाप भएका व्यक्तिले दैनिक खानपानमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । खानामा नुन, चिनी, घ्यू र तेलको मात्रा कम हुनु जरुरी छ । उच्च रक्तचाप भएकाहरुलाई मधुमेह, यूरिक एसिड, उच्च रक्तकोलेस्टेरोल पनि हुने अत्यधिक संभावना रहन्छ ।
यी रोगको नियन्त्रणका लागि पनि खानापानमा विशेष ध्यान पु¥याउनु जरुरी हुन्छ । कतिपय खाद्यपदार्थहरु यस्ता पनि छन् जसले रक्तचाप नियन्त्रणमा सहयोग पु¥याउँदछन् ।
# उच्च रक्तचाप भएकाले खानै नहुने खानेकुराहरु
१. अचार :
अचार चाहे जे को होस्, उच्च रक्तचाप भएकाहरुले नखाँदा बेस हुन्छ । अचारमा क्यालोरी कम हुने भएपनि सोडियम लवण उच्च हुन्छ ।
२. पापड :
३. अल्कोहल :
मदिरा सेवन उच्च रक्तचाप भएकाहरुका लागि निकै घातक सावित हुनसक्छ । अल्कोहलले रक्तचाप झनै बढाउँछ । यसले रक्तनलीको भित्तामा क्षति पूराउँछ र जोखिम झनै बढाउँछ ।
४. चिल्लो तथा बोसोयुक्त खानेकुराहरुको बढि सेवन गर्नु हुँदैन :
तारेको तथा झानेको खानेकुरा, बोसोयुक्त मासु तथा रातो मासुका साथै दुध, दही, घिउको बढि सेवन पनि हानिकारक हुन्छ । पानी नहालेको एक कप दुधमा ८ ग्राम चिल्लो हुन्छ । ८ ग्राममध्ये ५ ग्राम त संतृप्त फ्याट हो जुन सरीरका लागि हानिकारक हुन्छ । त्यसकारण फ्याट निकालेको दुध पिउनु राम्रो हुन्छ ।
५. डुनोट :
६. चाउचाउ तथा अन्य फास्टफुड :
तयारी चाउचाउ निकै सजिलो तथा स्वादिलो खाजा हो । तर उच्च रक्तचाप भएकाहरुका लागि यो खानै नहुने चिज हो । एक कप चाउचाउको सुपमा ८८० मिलिग्रामसम्म सोडियम हुन्छ ।
चाउचाउसँगै धेरै नुन तथा चिल्लो भएका अरु फास्टफुडहरुले पनि रक्तचाप बढाउने गर्दछन् । नुनमा पाइने सोडियमको मात्रा धेरै भयो भने मुटु तथा रक्तनलीमै क्षति पूराउने र रक्तचाप उल्लेखनीय रुपमा बढ्ने जोखिम हुन्छ ।
७. चिनी :
चिनी तथा चिनीयुक्त खानेकुराहरुको अधिक सेवन पनि उच्च रक्तचापको अवस्थामा हानिकारक हुन्छ । यसले मोटोपना बढाउने हुनाले स्वतःः रक्तचाप पनि बढाउँछ ।
८. कफी :
कफीमा हुने क्याफाइन तत्वले रक्तचाप बढाउँछ । त्यसैले रक्तचाप उच्च हुने मानिसले कफीको बढि सेवन गर्नु हुँदैन ।
कसरी घटाउने उच्च रक्तचाप ?
रक्तचापले कुनै लक्षण लिएर आँउदैन, कसै कसैमा मात्र टाउको दुख्ने, रिङ्गटा लागेजस्तो हुने देखिन्छ। रक्तचापको नियमित परिक्षण गराउनु नै यसको सबभन्दा उत्तम उपाए हो।
उच्च रक्तचापले के गर्दछ ?
१.हृदयघातको जोखिम बढाउछ | मुटुको कार्यक्षमतामा ह्रास आइ हार्ट फेलर मा जान सक्छ |
२.देब्रे तर्फको मुटु सुन्निन गइ हार्ट फेलर, मुटुको चालमा अनियमितता, आकस्मिक मृत्यु आदि हुने जोखिम बढाउँछ |
३.मस्तिष्कको नशामा रगत जम्न गइ वा नशा फुटेर मस्तिष्कघात (प्यारालाइसिस) हुने जोखिममृगौला को दीर्घरोग गराइ मृगौला फेल हुने जोखिम बढाउँछ |
४.नियन्त्रण नगरिएको रक्तचापले एक्कासि धेरै बढेर ज्यान पनि जान सक्छ |
तौल घटाउनुहोस् (यदि मोटोपन छ भने)
खानामा प्रशस्त फलफुल तथा तरकारी, बोसो कम भएका दुग्ध उत्पादन खानुहोस् तथा कम मात्रामा मात्र माछा-मासु, मिठाइहरु र प्रसोधित खानेकुराहरु र
बजारका खानेकुराहरु जस्तै जङ्क खानेकुराहरु
नुन कम खानुहोस् (औसतमा दिनमा प्रति व्यक्ति ५ ग्राम भन्दा कम नुन)
दिनको कमसेकम ३० मिनेट शारिरिक व्यायाम गर्नुहोस् (छिटो छिटो हिड्ने, दौडने, उफ्रने वा अन्य त्यस्तै व्यायाम)
रक्सी पिउनुहुन्छ भने एकदम कम मात्रामा मात्र पिउनुहोस्
धुम्रपान बन्द गर्नुहोस्
एकैपटक नुनको मात्रा ज्यादै कम गर्न गार्हो हुन्छ र त्यसो गर्दा स्वास्थ्यलाई पनि राम्रो गर्दैन। ताजा तरकारीहरु, नुनरहित मसलाहरु, कागती वा अन्य अमिलो पदार्थ जस्तै भिनेगारको प्रयोग नुनका विकल्प हुन सक्छन्।
नुनको स्वाद मानिसको जिब्रोका लागी प्राथमिक स्वाद हैन तसर्थ केही हप्ता नुन कम गर्न सके जिब्रोलाई बानी पार्न सकिन्छ। र नुन कम गर्नुको मतलब तपाईँले अलिनो नै खानुपर्छ भन्ने पनि हैन!
Topics #उच्च रक्तचाप #उच्च रक्तचापका कारण #पीडित
Don't Miss it पुदिना स्वादिलो अचारमा मात्र होइन, यसले हाम्रो स्वस्थ्यमा पनि स्वादिलो फाइदा पुर्याउछ जान्नुहोस्